ချစ်တဲ့ ဖရဒ် နဲ့ မိုလ်ဒီ အထိပြန်မယ့် ဆိုးလ်ရှားရဲ့ သရေပွဲ(ပွဲပြီး သုံးသပ်ချက်) - United News Myanmar
ချစ်တဲ့ ဖရဒ် နဲ့ မိုလ်ဒီ အထိပြန်မယ့် ဆိုးလ်ရှားရဲ့ သရေပွဲ(ပွဲပြီး သုံးသပ်ချက်)
ဆိုးလ်ရှား ကတော့ တစ်ဂွင်မြင်တစ်ကွက်ဆန်း ဆိုသလို တစ်ပွဲတစ်မျိုးမရိုးရတဲ့ လူစာရင်းနဲ့အတူ အသုံးပြု ပွဲထွက်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ သားတော်တစ်သိုက်ဖြစ်တဲ့ မက်-ဖရဒ် အတွဲကတော့ မဖြစ်မနေ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ရော်နယ်ဒို၊ပေါဂ့်ဘာ၊ဆန်ချိုတစ်ယောက်ကိုမှအသုံးမပြုခဲ့ပဲရဲရင့်စွာနဲ့ အရံကစားသမား တွေကို ပွဲချိန်စထဲကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ နောက် ပွဲထွက်လူစာရင်းနဲ့ ပက်သက်လို့ ပရိတ်သတ်တွေ ရဲ့မကျေလည်မှု့ကအတော်လေး ကြီးမားလာရပါတယ်။
ယူနိုက်တဒ် အနေနဲ့ ဒီပွဲကို အတော်လေး အနိုင်ရဖို့ လိုအပ်နေတာကြောင့်လည်း ပွဲစတာ နဲ့ ဖိအားပေးတိုက်စစ်ဆင်ခဲ့သလို လန်းဆန်းနေတဲ့ ကစားသမားအများစုနဲ့ ပွဲထွက်လာတာကြောင့်လည်း အတော်လေးဖိဖိစီးစီး ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမ ငါးမိနစ်အတွင်းမှာပဲ မာစီရယ် ရဲ့ အပိုင်ခေါင်းတိုက် ချက်က ဂိုးပေါက်နဲ့ လွဲချော်ခဲ့သလို ကာဗာနီ ရဲ့ ခေါင်းတိုက်ချက်ကိုလည်း မိနစ် (၂၀) မှာ ပဲ ပစ်ဖိုဒ့် ကာကွယ်နိုင်ခဲ့လို့ အဲဗာတန် အတွက် သက်သာရာရစေခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တဒ် ကစားသမားတွေက ဒီနေ့ပွဲမှာ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ Low block ကို ကျော်လွန်ဖို့အတွက် ခပ်မြန်မြန်ပေးပို့ နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သလို အတော်လေးလည်းအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဗာတန် အနေနဲ့ တန်ပြန်တိုက်စစ်ကိုသာ အဓိက အားပြုကစားလိုတာကြောင့် ယူနိုက်တဒ် ခံစစ်ကို ပထမပိုင်းမှာ ထိထိရောက်ရောက် မထိုးဖောက်နိုင်ပဲ ဂရေး ရဲ့ ကန်ချက် ကနေသာ ဒဟေးယား ကာကွယ်ခဲ့တဲ့ တစ်ကြိမ်သာ ပထမပိုင်းမှာ ထိထိမိမိရှိခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းပြီးခါနီးမှာတော့ ဂရင်းဝုဒ် ရဲ့ အကွက်မြင်တဲ့ပေးပို့မှု့ကနေ ဘရူနို က အစောပိုင်းထဲက မြင်ထားတဲ့ မာစီရယ် ရဲ့ နေရာလွတ်ထဲ မျှောချပေးခဲ့တာကနေ ပြင်သစ်သားအတွက် ပထမဆုံး ဂိုးကို ရရှိစေခဲ့ကာ ယူနိုက်တဒ်အတွက် ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာ ယူနိုက်တဒ် ကစားသမား တွေရဲ့ အချိတ်ဆက်မိမှု့ က အတော်လေးအားရစရာကောင်းခဲ့ ပြီး အဲဗာတန် ကိုထိထိရောက်ရောက် ထိုးဖောက် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်းမှာလည်း ယူနိုက်တဒ် က ကစားပုံကောင်းကောင်းနဲ့ ဆက်လက် ကစားနိုင်ခဲ့ပြီး အဲဗာတန်ကိုဖိအားပေးနိုင်ပေမယ့် ဒုတိယမြောက် ဦးဆောင်ဂိုးတော့ရရှိဖိူ့ခက်ခဲနေလို့ အဲဗာတန် အတွက် အခွင့်အရေးတချို့ ရရှိလာပါတယ်။
ယူနိုက်တဒ် အနေနဲ့ ဒုတိယဂိုးကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရရှိစေရန် အတွက် ရော်နယ်ဒို နဲ့ ဆန်ချို ကို ပြောင်းလဲထည့်သွင်းခဲ့ပေမယ့် ချေပဂ်ိုးကတော့ အဲဗာတန် အသင်းသာ ရရှိသွားပါတယ်။ ယူနိုက်တဒ်ရဲ့ထောင့်ကန်ဘောအခွင့်အရေးကနေ တန်ပြန်တိုက်စစ်လွတ်သွားတာကို ဖရဒ်ရဲ့ညံဖျင်းလွန်းတဲ့ လူကပ်ကစားပုံနဲ့ ဖျတ်ထုတ်ပုံမသေသပ်တာကနေ ဂရေး က ရရှိသွားပြီး ဒွန်ကော်ရေး ကတဆင့် တောင်ဆန်က လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ရရှိသွားပြီးနောက် ချေပဂိုးစတင်ရရှိသွားပါတယ်။ယူနိုက်တဒ်ဖက် က အလျှင်အမြန်ပဲပေါဂ့်ဘာ ကိုထပ်ပြီးထည့်သွင်းပေးမယ့် (၈၅) မိနစ်မှာ ဂိုးရသွားတာက အဲဗာတန်သာ ဖြစ်ပြီး VAR ကြောင့်ငါ မီနာလူကျွံနေလို့ ဂိုးကနေ ပယ်ဖျတ်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ယူနိုက်တဒ်အနေနဲ့ အနိုင်ဂိုး ထပ်မံရရှိဖို့ ကြိူးစားခဲ့ပေမယ့် ထပ်မံရရှိခဲ့ခြင်းမရှိလို့ ဆိုးလ်ရှား ချစ်တဲ့ ဖရဒ်ပေးတဲ့ တစ်မှတ်သာ ရရှိခဲ့ရင်း…….
ဆိုးလျရှား ကတော့ တဈဂှငျမွငျတဈကှကျဆနျး ဆိုသလို တဈပှဲတဈမြိုးမရိုးရတဲ့ လူစာရငျးနဲ့အတူ အသုံးပွု ပှဲထှကျခဲ့ပမေယျ့ သူ့ရဲ့ သားတျောတဈသိုကျဖွဈတဲ့ မကျ-ဖရဒျ အတှဲကတော့ မဖွဈမနေ ပါဝငျလာခဲ့ပါတယျ။ ရျောနယျဒို၊ပေါဂျ့ဘာ၊ဆနျခြိုတဈယောကျကိုမှအသုံးမပွုခဲ့ပဲရဲရငျ့စှာနဲ့ အရံကစားသမား တှကေို ပှဲခြိနျစထဲကအသုံးပွုခဲ့တဲ့ နောကျ ပှဲထှကျလူစာရငျးနဲ့ ပကျသကျလို့ ပရိတျသတျတှေ ရဲ့မကလြေညျမှု့ကအတျောလေး ကွီးမားလာရပါတယျ။
ယူနိုကျတဒျ အနနေဲ့ ဒီပှဲကို အတျောလေး အနိုငျရဖို့ လိုအပျနတောကွောငျ့လညျး ပှဲစတာ နဲ့ ဖိအားပေးတိုကျစဈဆငျခဲ့သလို လနျးဆနျးနတေဲ့ ကစားသမားအမြားစုနဲ့ ပှဲထှကျလာတာကွောငျ့လညျး အတျောလေးဖိဖိစီးစီး ကစားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပထမ ငါးမိနဈအတှငျးမှာပဲ မာစီရယျ ရဲ့ အပိုငျခေါငျးတိုကျ ခကျြက ဂိုးပေါကျနဲ့ လှဲခြျောခဲ့သလို ကာဗာနီ ရဲ့ ခေါငျးတိုကျခကျြကိုလညျး မိနဈ (၂၀) မှာ ပဲ ပဈဖိုဒျ့ ကာကှယျနိုငျခဲ့လို့ အဲဗာတနျ အတှကျ သကျသာရာရစခေဲ့ပါတယျ။ ယူနိုကျတဒျ ကစားသမားတှကေ ဒီနပှေဲ့မှာ ပွိုငျဘကျရဲ့ Low block ကို ကြျောလှနျဖို့အတှကျ ခပျမွနျမွနျပေးပို့ နိုငျရနျကွိုးပမျးခဲ့သလို အတျောလေးလညျးအလုပျဖွဈခဲ့ပါတယျ။
အဲဗာတနျ အနနေဲ့ တနျပွနျတိုကျစဈကိုသာ အဓိက အားပွုကစားလိုတာကွောငျ့ ယူနိုကျတဒျ ခံစဈကို ပထမပိုငျးမှာ ထိထိရောကျရောကျ မထိုးဖောကျနိုငျပဲ ဂရေး ရဲ့ ကနျခကျြ ကနသော ဒဟေးယား ကာကှယျခဲ့တဲ့ တဈကွိမျသာ ပထမပိုငျးမှာ ထိထိမိမိရှိခဲ့ပါတယျ။ပထမပိုငျးပွီးခါနီးမှာတော့ ဂရငျးဝုဒျ ရဲ့ အကှကျမွငျတဲ့ပေးပို့မှု့ကနေ ဘရူနို က အစောပိုငျးထဲက မွငျထားတဲ့ မာစီရယျ ရဲ့ နရောလှတျထဲ မြှောခပြေးခဲ့တာကနေ ပွငျသဈသားအတှကျ ပထမဆုံး ဂိုးကို ရရှိစခေဲ့ကာ ယူနိုကျတဒျအတှကျ ဦးဆောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပထမပိုငျးမှာ ယူနိုကျတဒျ ကစားသမား တှရေဲ့ အခြိတျဆကျမိမှု့ က အတျောလေးအားရစရာကောငျးခဲ့ ပွီး အဲဗာတနျ ကိုထိထိရောကျရောကျ ထိုးဖောကျ နိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒုတိယပိုငျးမှာလညျး ယူနိုကျတဒျ က ကစားပုံကောငျးကောငျးနဲ့ ဆကျလကျ ကစားနိုငျခဲ့ပွီး အဲဗာတနျကိုဖိအားပေးနိုငျပမေယျ့ ဒုတိယမွောကျ ဦးဆောငျဂိုးတော့ရရှိဖိူ့ခကျခဲနလေို့ အဲဗာတနျ အတှကျ အခှငျ့အရေးတခြို့ ရရှိလာပါတယျ။
ယူနိုကျတဒျ အနနေဲ့ ဒုတိယဂိုးကို မွနျမွနျဆနျဆနျ ရရှိစရေနျ အတှကျ ရျောနယျဒို နဲ့ ဆနျခြို ကို ပွောငျးလဲထညျ့သှငျးခဲ့ပမေယျ့ ခပြေဂိုးကတော့ အဲဗာတနျ အသငျးသာ ရရှိသှားပါတယျ။ ယူနိုကျတဒျရဲ့ထောငျ့ကနျဘောအခှငျ့အရေးကနေ တနျပွနျတိုကျစဈလှတျသှားတာကို ဖရဒျရဲ့ညံဖငျြးလှနျးတဲ့ လူကပျကစားပုံနဲ့ ဖတျြထုတျပုံမသသေပျတာကနေ ဂရေး က ရရှိသှားပွီး ဒှနျကျောရေး ကတဆငျ့ တောငျဆနျက လှတျလှတျကြှတျကြှတျ ရရှိသှားပွီးနောကျ ခပြေဂိုးစတငျရရှိသှားပါတယျ။ယူနိုကျတဒျဖကျ က အလြှငျအမွနျပဲပေါဂျ့ဘာ ကိုထပျပွီးထညျ့သှငျးပေးမယျ့ (၈၅) မိနဈမှာ ဂိုးရသှားတာက အဲဗာတနျသာ ဖွဈပွီး VAR ကွောငျ့ငါ မီနာလူကြှံနလေို့ ဂိုးကနေ ပယျဖတျြပေးခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ယူနိုကျတဒျအနနေဲ့ အနိုငျဂိုး ထပျမံရရှိဖို့ ကွိူးစားခဲ့ပမေယျ့ ထပျမံရရှိခဲ့ခွငျးမရှိလို့ ဆိုးလျရှား ခဈြတဲ့ ဖရဒျပေးတဲ့ တဈမှတျသာ ရရှိခဲ့ရငျး…….
Previous Article မားကပ်စ်ရရ်ှဖိုဒ့် ပွဲပြန်ထွက်နိုင်မယ့် ရက်အတိကျကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ဆိုးလ်ရှား
Next Article ဆိုးလ်ရှား အတွက် ရာဇသံပေးလိုက်တဲ့ ဂလေဇာ